Hindisaha FP oo laga canbaareeyey Twitterka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
La daabacay tisdag 12 juni 2012 kl 11.55
Canbaarayn badan ayaa loo jeedinayo hindisaha isdhexgalka ee xisbiga Folkpartiet kuwaas oo hada iska soo daba dhacaysa dhanka alaada Twitterka. Cabaaraynta ayaa inta badan ka imaanaysa xisbiyada kala ah Miljöpartiet, Soshiyaaldemokaraatiga iyo dadka ay afkaartooda siyaasadeed u janjeerto dhanka bidixda. Waxaa sidoo kale canbaarayn ka soo yeeraysaa xisbiga midigta fog ee Sverigedemokraterna.
"Ma jiraa qof banaanka ka jooga xisbigaan oo weli u arka FP xisbi aaminsan afkaarta liberaliga ah?" ayuu isweydiiyey Fredrik Petterson oo ah tafatiraha dhanka siyaasada ee wargeyska Folket.
Daniel Swedin oo asna ah qoraaga boga hore ee wargeyska Aftonbladet ayaa asna isweediyey su'aal kale: "Sidee lagu garan karaa welwelka ay xisbiya hantigoosadka ah ka qabaan tageero xumada haysata? U fiirso kaliya hab dhaqanka maantay ee FP".
"Markay ku xuntahay FP bay jeebka kala soo baxaan sharuuda luuqada". Sidaas waxaa qoray Per Olsson oo ah gudoomiyaha MP ee magaalada Stockholm. Sidoo kale xoqhayaha isla xisbigaan Pontus Hummelman ayaa Twitter ku qoray, " Hadaad ka nijad jabtay oo ku daashay FP ku soo dhawow MP".
Xataa Twitterada ay qoreen Sverigedemokratiga ayaan la dhacsanayn hindisaha FP ee isdhexgalka.
"Waa la fahmi karaa in ay doorashado soo dhowdahay hadiiba ay FP bilaabeen beentii ahayd sharuudo adag ha lagu xiro soo galootiga" ayuu twitter ku qoray xildhibaanka barlamaanka u fadhiya xisbigaas Erik Almqvist.